इजरायलको रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा सकियो, अब कसरी छानिएर, कहिले जान पाइन्छ त ? - Abhiyan news
२८ भाद्र २०७८, सोमबार १३:५२ अभियान न्यूजLeaveaComment on इजरायलको रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा सकियो, अब कसरी छानिएर, कहिले जान पाइन्छ त ?
इजरायलको रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा आज सकिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान इच्छुक युवाहरुको भाषा परीक्षा सम्पन्न गरेको हो । बिभागले तोकेको काठमाडौँका १६ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा शान्तिपूर्ण र अनुशासित रुपमा सम्पन्न भएको वैदेशिक रोजगार बिभागले जनाएको छ ।
इजरायल जान ४ हजार २ सय महिला र ५ हजार ४ सय ९९ पुरुष गरी ९ हजार ६ सय ९९ नेपालीले आवेदन दिएका थिए । जस मध्ये ७ हजार ९ जनाले प्रवेशपत्र पाएका थिए । प्रवेशपत्र प्राप्त गरेका ३ हजार ७२७ पुरुष र ३ हजार २८२ जना महिला मध्ये सोमबारको परीक्षामा ६९२ जना परीक्षार्थी अनुपस्थित भए।
परीक्षाको नतिजा २ देखि ५ दिनभित्रमा प्रकाशन गरेर १० देखी १२ दिन भित्र अन्तर्वार्ता लिने र असोज दोस्रो हप्तासम्म योग्यता पुगेका १ हजार ४ सय कामदारको सूची तयार गरि इजरायल सरकारलाई उपलब्ध गराउने विभागको तयारी रहेको बिभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कमल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
ज्ञवालीले भने ‘परीक्षा दिएकाहरुको कपि सिरियल छ भने परीक्षामा सहभागीहरुको ओएमआर बिधिबाट कपि चेक हुने हुँदा दुई दिनमै नतिजा दिन सकिने सम्भावना छ ।’ भाषा परीक्षा पछी के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीको अनुसार परीक्षामा सहभागी भएका महिला र पुरुषले पाएको अंकको आधारमा १६८० जना अन्तर्वार्ताको लागि छनौट हुनेछन् ।
जसमा ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष छानिने छन् । अन्तर्वार्ताको क्रममा २८० जना बाहिरिने मध्ये ३० प्रतिशत पुरुष र ७० प्रतिशत महिला पर्नेछन् । यसरी एक हजार ४०० जनाको नाम इजरायल सरकारलाई बुझाइनेछ । दुतावासले पाएको उक्त नाममध्ये कम्प्युटर प्रविधिबाटै ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष गोलाप्रथा मार्फत छानिनेगरि ७०० महिला र ३०० पुरुष इजरायल रोजगारको लागि छनोट हुनेछन् ।